တရုတ်နိုင်ငံက ကုန်းမြေလေ့လာရေးအတွက် L-SAR 01A ဂြိုဟ်တုအား လွှတ်တင် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ကျိုချွမ်ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရေးစင်တာမှ ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်တွင် ပစ်လွှတ်သော L-SAR 01A ဂြိုဟ်တုအား သယ်ဆောင်ထားသည့် Long March-4C ဒုံးပျံအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကျိုချွမ် ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံသည် အာကာသအတွင်း ဂြိုဟ်တုသစ် တစ်စင်းအား ထားရှိရန် ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်တွင် Long March-4C ဒုံးပျံတစ်စင်းအား လွှတ်တင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဒုံးပျံသည် တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ကျိုချွမ်ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရေးစင်တာ၌ ပေကျင်းစံတော်ချိန် နံနက် ၇ နာရီ ၄၄ မိနစ်တွင် ပစ်လွှတ်ခဲ့ပြီး မကြာမီတွင် L-SAR 01A ဂြိုဟ်တုအား ကြိုတင်ချိန်ကိုက်ထားသည့် ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းအတွင်းသို့ ပို့လွှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဂြိုဟ်တုအား ဘူမိဗေဒပတ်ဝန်းကျင် ၊ မြေပြိုမှုများ နှင့် ငလျင်များအား စောင့်ကြည့်ရာတွင် အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ခြင်းသည် Long March သယ်ဆောင်ရေးဒုံးပျံများ၏ ၄၀၇ ကြိမ်မြောက် လွှတ်တင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
JIUQUAN, Jan. 26 (Xinhua) — China launchedaLong March-4C rocket to placeanew satellite in space on Wednesday.
The rocket blasted off at 7:44 a.m. (Beijing Time) at the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China and soon sent L-SAR 01A satellite into preset orbit.
The satellite will be used to monitor geological environment, landslides and earthquakes.
The mission marked the 407th flight of the Long March carrier rockets, said the launch center. ■
Photo 1 – A Long March-4C rocket carrying L-SAR 01A satellite blasts off from the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China, Jan. 26, 2022. (Photo by Wang Jiangbo/Xinhua)
Photo2– A Long March-4C rocket carrying L-SAR 01A satellite blasts off from the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China, Jan. 26, 2022. China launchedaLong March-4C rocket to placeanew satellite in space on Wednesday.
The satellite will be used to monitor geological environment, landslides and earthquakes. (Photo by Wang Jiangbo/Xinhua)
Photo3– A Long March-4C rocket carrying L-SAR 01A satellite blasts off from the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China, Jan. 26, 2022. China launchedaLong March-4C rocket to placeanew satellite in space on Wednesday.